Fakafakao ny lamina fampiasanao fitaovana hitantanana ny bateria | Vaovao IPhone
Fakafakao ny lamina fampiasanao fitaovana hitantanana bateria
Izay mpampiasa fitaovana finday izay anontaniana momba izay hanatsara azy ireo dia azo antoka fa hampiditra ny fiainana bateria amin'ireo valintenin'izy ireo. Ity dia iray amin'ireo teboka ratsy indrindra, indrindra amin'ny smartphone, fa amin'ny solosaina finday sy ny takelaka ihany koa. Ary ny ratsy indrindra dia izany kely ny fandrosoana azo tato anatin'ny taona vitsivitsy, mifanohitra tanteraka amin'izany. Manana fitaovana finday vaovao matanjaka kokoa izahay, miaraka amin'i endri-javatra bebe kokoa, ary farafaharatsiny dia mahazo ny bateria haharitra mitovy amin'ny an'ny fitaovana taloha isika. Patanty vaovao navoaka androany dia miresaka momba ny rafitra vaovao izay tian'i Apple hampiasaina hanatsarana ny fitantanana bateria izay ataon'ireo findainy.
Ny patanty dia mamaritra ny rafitra iray izay mamakafaka ny fahazaranao amin'ny fampiasana ilay fitaovana, manombatombana ny fotoana hatramin'ny fiampangana manaraka, manombana raha manana angovo ampy ho azy ilay fitaovana. Raha sanatria ka tsy ampy ny herin'ny bateria arakaraka ny kajy nataonao dia hanafoana ireo fiasa izay heverinao fa tsy ilaina amin'izao fotoana izao ny rafitra hiarovana ny herin'ny bateria. Ny rafitra koa dia hitadidy ireo "toerana fandefasana" matetika indrindra mampiasa ny rafitry ny toerana misy ny fitaovana. Miankina amin'ny toerana misy anao sy ny fotoana mandra-pahatongan'ny toerana famerana manaraka, azonao atao ny manisa ny fotoana ilaina mandra-pifandraisanao mampifandray ny fitaovanao amin'ny tamba-jotra.
Ny rafitra dia mamela ny fanamboarana sasany ihany koa, ahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny angon-drakitra mamela ny fitantanana tsara kokoa ny fanjifana bateria. ¿Ahoana ny rafitry ny mombamomba ny mpampiasa izay mamela anao hanova haingana ireo fiasan'ny fitaovana? Ny famonoana ny tamba-jotra data ao an-trano sy any am-piasana rehefa manana fifandraisana WiFi ianao, na mamono ny WiFi rehefa eny an-dalana ianao mampiasa ny fifandraisana data dia iray amin'ireo safidy lehibe indrindra azo ampiharina ary azo antoka fa hanampy minitra vitsy amin'ny fizakan-tena.
Fanazavana fanampiny - Google dia manolotra ny Nexus 7. Ny iPad Mini Retina dia efa manana mpifaninana aminy.
Loharano - AppleInsider
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fakafakao ny lamina fampiasanao fitaovana hitantanana bateria
Podcast 3x28 an'ny Actualidad iPhone